10-ka Bangi Ee Adduunka Ugu Awooda Badan 2014 - Daryeel Magazine
10-ka Bangi Ee Adduunka Ugu Awooda Badan 2014
Dunida hay’adaha kala duwan ee ka hawlgala way kala awood badan yihiin, isla markaana kala saamayn badan yihiin.
Haddaba, sannadkan 2014-ka tobanka baan ee ugu awoodda badan, uguna saamaynta weyn dhinaca is-waydaarsiga iyo kaydsiga lacagta waxay kala yihiin;
Baanka ugu horreeya waxa noqday Malaysian Bank, waana bangi dib-u-habayn hadda lagu sameeyey, aadna loogu kalsoon yahay. Waxa uu aad u ilaaliyaa macaamiishiisha, isagoo adeegyo bangi iyo daynba bixiya, waxaannu qayb muhiim ah ka qaataa dhaqaalaha dalka Malaysia.
Bangiga Bayerische Landesbank ee Jarmalka:
Bangiga kaalinta 2aad galay waa baan ku yaal dalka Jarmalka oo bangiyadii ka jiray shiiqiyey, waana mid ka mid ah waxyaabaha dhaqaalaha dalka kor u qaada, awoodna u yeela maalgashiga. Bangiga Bayerische Landesbank oo ah mid aan inta badan aad u dadku jecel yahay.
Credit Suisse Bank ee dalka Switzerland:
Bangiga Creit Suisse Bank oo kaalinta labaad ku jira, waa bangiga ugu awoodda badan, looguna aaminsan yahay dalka Switzerland. Sharkado badan oo caalami ah ayaa door bida inay lacagtooda ku kaydsadaan, kuna dirtaan bangigan, waana ta keentay inuu noqdo mid aad loo jecel yahay.
Oversea Chinese Bank:
Bangigani waxa uu caan ku yahay xalinta arrimaha bangiyada ku saabsan, gaar ahaan dadka maalgashiga waddamada caalamka ku samaysanaaya, waana bangiga ugu awoodda badan Shiinaha tobannaankii sanno ee u dambeeyey.
Qatar National Bank:
Bangiga Qadar waa mid ka mid ah bangiyada ugu sharafta badan caalamka, isla markaana awooddiisu aad u weyn tahay, waxaannu baankani aad caan ugu ah oo hantida dhigta waddamada Imaraadka Carabta oo dhan, isagoo xataa amaah siiya ganacsatada shirkadaha maalgashiga ku samaynaysa.
Toronto Dominion Bank:
Bangiga Toronto Dominion Bank waa bangiga 100% ka masuulka ah in dhaqaalaha Canada noqdo mid xooggan, waxaannu maareeyaa, masuulna ka noqdaa inta badan xaaladaha maaliyadeed ee dalkaas kolba heerka ay taagan yihiin.
BOC Holding Hong Kong Bank:
Hadday noqoto lacag kala-beddelasho amma in la furto akowno heer caalami ah bangiga BOC Holding Hong Kong waa waxyaabaha uu caanka ku yahay, waana baan inta badan ganacsatada caalamku kaga soo hirtaan Hong Kong.
OP Pohjola Bank:
Waa bangi dib loo habeeyey oo noqday bangiga ugu awoodda badan dalka Finland, waxaannu qayb muhiim ah ka qaataa kor-u-qaadidda dhaqaalaha waddankaas. Sannado badan waxa uu iminka ka mid ahaa bangiyada caalamka ugu sharafta iyo karaamada badan.
Nova Scotia Bank ee dalka Canada:
Waxa inta badan ganacsatada adduunka iyo dadkuba ugu soo hirtaan waa mid macaamiishiisa ugu badan daafaha caalamka ka yimadaan, waxana dadku ka samaysan karaan akawnada wax lagu kaydsado iyo qaar caalami ahba.
Sidoo kale, bangigan waxa uu ka qaybqaata kobcinta dhaqaalaha iyo bixinta ammaaha ganacsatada yaryar.
Imperial Bank of Cemmerce:
Bangigan oo ah ka ugu dambeeya 10 bangi ee caalamka ugu fiican waa bangi ganacsiyeed, waana bangiga ugu ballaadhan dalka Canada marka la reebo Nova Scotia Bank. Waxaannu caalamka ku leeyahay balaayiiin macaamiil ah oo hantidooda ku kaydsada, halka qaar kalena lacagaha isku waydaarsadaan.
Qofka Oo Naftiisa La Sheekaysta Waxay Xoojisaa Awooda Xusuusta Maskaxda 7 Caado Oo Kor U Qaada Awooda Maskaxda Waxyaabaha Ugu Badan Ee Raggu Ay Ku Soo Jiitaan Dumarka